Xog: Kheyre oo ka walaacsan in Mursal uu is-beddelay oo uu gacantiisa ka baxay - Caasimada Online
Home Warar Xog: Kheyre oo ka walaacsan in Mursal uu is-beddelay oo uu gacantiisa...
Muqdisho (Caasimada Online) – Xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ka walaacsanin guddoomiyaha baarlamanaka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu siyaasad ahana is-beddelay, oo uusan hadda ahayn ninkii la filayey.
Mursal ayaa waxaa kursiga ku fariisisay xukuumadda, oo ka fileysa inuusan marnaba ka hor-iman. Hase yeeshee, Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay inay jiran astaamo muujinaya in Mursal uu ceyrsanayo siyaasado ka hor-imanaya qorshaha xukuumadda.
Walaaca koowaad ee Kheyre ku dhashay ayaa yimid kadib markii Mursal uu kasoo horjeestay ciidamadii la geeyey Baydhaba. Ciidamadaas ayaa sida aan horey u daabacnay qorshahoodau yahay in awood ciidan ay ku hor-istaagaan musharaxnimada Roobow. Halkan ka aqri warkaas.
Sidoo kale kulankii shalay uu Mursal la yeeshay gudoomiyeyaashii hore ee baarlamanka Soomaaliya, Jawaari iyo Aadan Madoobe ayaa sii xoojiyey walaaca xukuumadda, sababtoo ah lagalama tashan Kheyre iyo Farmaajo midna.
Ilo-wareedyo ku dhow Mursal ayaa sheegaya inuu cadaadis xooggan kala kulmayo beeshiisa, oo ku ceebeysatay inuusan ahayn nin go’aan leh oo kursigiisa awooddiisa adeegsan kara, taasi oo keentay inuu qaato go’aano aysan ku faraxsaneyn xukuumadda.
Mursal ayaa dhinaca kale weli aqbalin codsi ka yimid ra’iisul wasaaraha oo ku saabsan in guddigii maaliyadda ee la kala diray uu soo celiyo balse xubnaha mucaaradka ah ka saaro kuna beddelo xubno taageersan xukuumadda. Halkan ka aqri warkaas.
Arrimahan oo idil ayaa imanaya xilli mursal laga sugayo inuu caddeeyo mowqifkiisa, isaga oo toddobaad ka hor ballan-qaaday in marka uu Xamar ku laabto uu go’aan gaari doono, kuna dhawaaqi doona sida sharciga qabo, taaas oo ilaa hadda aan laga hayn.